Banyere amụma azụmaahịa | Ota Ward Cultural Promotion Association
Mkpakọrịta anyị ga-etinye onwe anyị na ijikọ ndị mmadụ, mmetụta uche, ọdịnala, nka, na ihe okike na mmemme ọdịbendị nke ndị bi na ngalaba ahụ, na-eduga na mmepe obodo.Ebumnuche anyị bụrụ obodo mara mma, nke dị mma, ma na-akwụghachi ụgwọ site na nkwalite ọdịbendị nke Ota Ward Democratic Body.
Ijikọ ọdịbendị nke ndị bi na ya
Ndị mmadụ, mmetụta uche, ọdịnala, usoro, okike na mmepe obodo
XNUMX ọzọ maka ịkwalite ọdịbendị
Ebumnuche otu anyị bụ "ịkwalite omenaala, bulie uru ịdị adị ndị mmadụ, bulie ndụ ha ike, mee ka mmekọrịta ha na otu onye sie ike, kwalite mgbanwe, na ịtụte ma mee ka mpaghara ahụ bụrụ ihe mara mma." Anyị ga-arụ ọrụ na nkwalite ọdịbendị dịka edepụtara na ya.
Na-eme ka ndụ bara ụba nke ọdịbendị dị iche iche mepụtara
Beinghụ ọdịbendị dịgasị iche na-eme ọtụtụ obi ụtọ ma na-akwalite ọtụtụ ihe okike.Ndị mmadụ nwere ike iji aka ha họrọ ụdị ọdịbendị dị iche iche, nke na-eduga n'ịmepụta ndụ bara ọgaranya.
Ọrụ nke ọrụ nke ọdịbendị na nka na-ejikọ ndị mmadụ na ọha mmadụ
Beingkpughere ma na-arụ ọrụ na ọdịbendị bụ ohere ịmepụta njikọ dị n'etiti ndị mmadụ na ọha mmadụ.Enwekwara ike iduga ndị nwere njikọ na-adịghị ike na ọha mmadụ n'ihi ọtụtụ ihe.Ọ na - eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya sie ike ma na - eduga na ndụ dị ndụ.
Nkwalite mmepe na-adigide nke ike mpaghara site n'ike nke ọdịbendị na nka
Site n'inwe ekele na isonye na omenaala dị iche iche, ihe okike nke ndị bi na ngalaba ahụ ga-abawanye.Na mgbakwunye, isonye n’ihe omume ọdịbendị na-eme ka mmekọrịta dị n’etiti ndị bi na ya mikwuo emie, kamakwa ọ na -emepụta obodo ọhụụ n’ọha ọhụrụ.Njikọ nke obodo ndị a na-eme ka e nwee njikọ ọdịnala.Ọ na - edugakwa na mmelite mpaghara yana mmepe na - adigide.
Ota Ward Cultural Promotion Association Ọkara-okwu Azụmaahịa Atụmatụ
Atụmatụ azụmaahịa nke ọkara (afọ nke mbụ nke Reiwa ruo afọ nke ise nke Reiwa)
Ndepụta nke usoro azụmaahịa ọkara oge
Akụkọ nyocha atụmatụ azụmaahịa ọkara